Baarlamaanka oo berito fadhi kale yeelanaya kadib markii kulankii shalay la carqaladeeyay – The Voice of Northeastern Kenya
Baarlamaanka oo berito fadhi kale yeelanaya kadib markii kulankii shalay la carqaladeeyay
Kadib markii shalay xildhibaanada ka soo jeedo isbeheysiga mucaradka ee Cord ay khalkhal geliyeen kulan looga gol lahaa in wax looga bedelo shuruucda arrimada doorshooyinka ee dhawaan la soo saaray, ayuu gudoomiyaha baarlamaanka Justin Muturi sheegay in berito ay dib u shirayaan mudanayaasha.
Baaqan dib laisugu yeeray xildhibaanada ayaa yimid saacado kadib markii shalay buuq hareeyay fadhigii socday ay keentay in dib loo dhigo howlaha baarlamaanka tan iyo 24-ka bisha koowad ee sanadka 2017-ka.
Qoraal lagu daabacay wargeysyada maxaliga ah ayaa lagu sheegay in xildhibaanada iyo dadweyanah lagu wargelinayo in berito oo khamiis ah taarikhduna ay ku beegantahay 22-ka bisha Disembar sanada 2016-ka labo fadhi uu baarlamaanka yeelanayo.
Saacada marka ay tahay 9:30 ee barqanimo ayuu fadhiga koowad bilaabayana ilaa iyo 1-da duhurnimo halka midka labaad uu qabsoomayo laga bilaabo 2-da duhurnimo uuna dhamaanayo ka hor saqda dhexe ee habeenimo.
Berito ayaa inta uu fadhigaasi socdo mar sedexaad la aqrin doonaa hindisa sharciyeedka ku aadan isbedelka lagu sameeyay shuruucda doorashooyinka.
Shalay ayay ahayd markii xubnaha isbeheysiga mucaradka ee cord ay farageliyeen fadhi la qorsheeyay in uu qabsoomo maadama ay ku tilmameen in uu ahaa mid sharci daro ah .
← Garabka mucaradka ee Gambia oo sheegay in madaxweyne Yaxya Jammeh aynan maxkamada geyn doonin marka oo xafiiska baneeyo
Nin 50 sano jir ah oo sameeyay imtixaanka KCPE-da oo doonayo cawimaad ku aadan sidii uu ugu biiri lahaa dugsiga sare →